LA OGAADAY: Qaabkii Uu Ku Bilawday Heshiikii Riyada U Muuqday Ee Cristaino Ronaldo & Juventus Oo La Ogaaday Iyo Waliba Shaqsigii Sababta Buuxa U Noqday Oo La Shaaciyay. - GoolTV.Net
By batalaale / 13/07/2018 13/07/2018
Dhawr todobaad ka hor markii ugu horaysay waxaa soo baxay in Cristaino Ronaldo uu doonayo kooxda Juventus laakiin qof kasta oo warkan maqlay waxa uu u haystay mid ka mid ah wararka xanta ah ee suuqa kala iibsiga ciyaartoyda, waxaana layaab lahayd in ciyaartoyda kooxda kowaad ee Real Madrid ayna rumaysan bixitaanka Ronaldo ilaa intii ay kooxdooda Los Blancos ku dhawaaqaysay.
Heshiiskaa qaabka riyada ah ku bilawday isla markaana xaqiiqda ku dhamaaday ayaa hadda la ogyahay waqtigii uu sida buuxda u bilawday, shaqsigii sababta u ahaa iyo waliba qaabkii ay xaaladu u dhacday oo dhamaystiran. Maamulka Juventus ayaa wax riyo aan rumoobi karin u muuqday xaqiiq la taaban karo u badalay.
Madax fulinta kooxda Juventus ee Giuseppe Marotta ayaa waraysi uu siiyay Corriere della Sera waxa uu shaaca kaga qaaday xiligii uu bilawday wada xaajoodka ay Cristaino Ronaldo ku doonayeen taas oo lama filaan kugu noqdan karta sida deg dega ah ee ay wax isku badaleen.
Madax fulinta kooxda Juventus ee Giuseppe Marotta ayaa waraysigan ku xaqiijiyay in riyada iyo rajada khiyaaliga u muuqatay ee Cristaino Ronaldo ay ka bilaaban tahay heshiiskii ay dhawaan kula soo wareegeen difaaca midig ee Joao Cancelo.
Wakiilka Cristaino Ronaldo ee Jorge Mendes ayaa kooxda Juventus ka caawiyay in ay kooxda Valencia dhawaan kala soo wareegtay difaaca ree Portugal ee Joao Cancelo wuxuuna noqday furihii uu Cristaino Ronaldo ku tagay Turin maadaama oo Jorge Mendes uu maamulka Juventus u soo bandhigay in ay xataa heli karaan Ronaldo.
Juventus ayaa Joao Cancelo ka bixsay 40.4 milyan euros wuxuuna u keenay dariiqii ay u mari lahaayeen Cristiano Ronaldo iyada oo maalulka Juventus ay markiiba xaalada kala sii haldeen Jorge Mendes oo hore go’aan uga haystay Ronaldo in uu ka baxayo Madrid xagaagan.
Madaxa fulinta kooxda Juventus ee Giuseppe Marotta ayaa shaqaalaha kooxdiisa si wayn ugaga mahad celiyay qaabkii deg dega badnayd ee ay ku dhamaystireen heshiiska Ronaldo laakiin waxa uu sidoo kale shaaca ka qaaday in Ronaldo uu ahaa shaqsigii ugu horeeyay ee heshiiskan aaminay isla markaana Juventus doortay.
Giuseppe Marotta oo arintan ka hadlayay ayaa yidhi: “Cristiano Ronaldo waxa uu ahaa qofkii ugu horeeyay ee heshiiskan aaminay, qofkii ugu horeeyay ee socodsiiyay, wuxuuna isagu doortay Juventus. Wax walba waxay ka bilawdeen heshiiskii Cancelo kaas oo wakiil la mid ah Ronalldo leh oo ah Jorge Mendes”.
Giuseppe Marotta oo sidoo kale ka hadlay wixii ay sameeyeen markii ay Jorge Mendes iyo Cristaino Ronaldo ka heleen damaanada in heshiiskani dhici karo wuxuuna yidhi: “Markii aanu xaqiijisanay in aanu fursadan qabsan karno, saamilaydu waxay ogolaadeen in ay kooxda taageeraan. Waxaanu doonaynay in aanu qeexno qanacsanaanta ugu saraysa iyo farxaada la soo saxiixashada Cristiano iyo go’aanka uu Juventus ku imanayay”.
Dhianca kale madaxa fulinta Juventus ee Giuseppe Marotta ayaa sheegay in Cristiano Ronaldo uu aad ugu faraxsan yahay in uu Juventus u ciyaaro wuxuuna yidhi: “Cristiano waxa uu aad ugu faraxsan yahay in uu u ciyaaro mid ka mid ah kooxaha aduunka ugu waa wayn, haddaba waxa uu go’aansaday halka uu ku noolaan doono – guri qurux badan oo ku yaala badhtamaha Turin”.
Si kastaba ha ahaatee, maamulka kooxda Juventus ayaa maalinta isniinta saxaafada u soo bandhigi doona heshiiska qaraniga ee Cristiano Ronaldo ugu soo biiray kooxdooda iyada oo la filayo in si layaableh loo soo buuxin doono garoonka isla markaana ay saxaafadu si wayn uga qayb qaadan doonto.